Buundada San Francisco | Wararka Safarka
Maria | | America, Mareykanka
Buundada San Francisco waa kaarka magaalada oo qof walba gurigiisa geeyo inta lagu jiro joogitaanka Xeebta Galbeed maadaama ay tahay goob dalxiis oo ay booqdaan in ka badan 10 milyan oo qof sanadkii.
Muujintan injineernimada ee isku xireysa Mari County ee California iyo San Francisco waxay noqotay astaan ​​astaan ​​u ah goobta istiraatiijiga ah iyo midabkeeda gaarka ah. Habeenkii, maalinti iyo had iyo jeer ceeryaamo, dad badan oo filim sameeyayaal ah, qorayaal iyo muusigga ayaa allifay sheeko ku saabsan buundada illaa laga soo dhisay San Francisco Bay.
Waa buundo ganaax ah oo ka gudubta marinka loo yaqaan 'Golden Gate Strait', kanaal dhererkiisu yahay ku dhowaad saddex kiilomitir oo isku xidha biyaha magaalada iyo Badweynta Baasifigga. Kahor dhismaheeda adeegga doonta caadiga ah ayaa shaqeynayay laakiin sida iska cad baahida loo qabo buundada ayaa lagama maarmaan ahayd. Dhibaatada 29 ayaa dib u dhigtay dhismaha laakiin ugu dambeyntii waxay bilaabatay 1933 waxayna dhammaatay 1937.
Maanta waxaad aadi kartaa socodka ama socodka fudud ama aad ku tagi kartaa baaskiil ama aad dalxiis ku tagi kartaa. Waxay leedahay Xarun Booqde oo u gaar ah oo leh macluumaad taariikhi ah iyo iibinta xusuusta. Xafiiskani wuxuu furan yahay 9ka subaxnimo ilaa 6da galabnimo waxaana badanaa jira bandhigyo is-dhexgal ah oo ka socda bannaanka. Toddobaadkiiba laba jeer waxaa jira safarro hagitaan oo bilaash ah, maalmaha Khamiista iyo Axadda.
Maxay ku saabsan tahay Buundada 'Golden Gate Bridge' oo ka duwan?
Waxaa loogu magac daray mashiinka ay ku dhex dhisantahay. Laakiin waa maxay sababta Golden Gate? Waxaa weeye in sidan loogu baabtiisay Kabtan John C. Fremont qiyaastii sanadka 1846 tan iyo markii ay xasuusisay deked ku taal Istanbul oo la yiraahdo Chrysoceras ama Golden Horn.
Naqshadeeda cajiibka ah waa shaqada dhowr qof oo naqshadeeyayaal ah, Irving iyo Gertrude Morrow, oo u fududeeyay tareennada dadka lugaynaya, iyaga oo u kala soocaya qaab aan caqabad ku noqon karin aragtida.
Dhismihiisu wuxuu socday in kabadan afar sano tan iyo markii uu bilawday 5-ta Janaayo 1933-ka waxaana buundada loo furay taraafikada gawaarida markay ahayd May 28, 1937.
Waxay leedahay qiyaas dherer ah oo ah 1.280 mitir qaybteeda sudhan biyaha, waxaa lagu hakiyay laba munaaradood oo dhererkoodu yahay 227 mitir, mid walbana midkiiba wuxuu leeyahay qiyaastii 600 kun oo rivets.
Dabaylaha iyo hirarka meesha ay ku socoto ayaa ka dhigay fiilooyinka birta ah ee loo adeegsado dhismihiisa inay yeeshaan dherer xad-dhaaf ah, oo ku filan inay saddex jeer dhulka ku wareegaan. Shakiga injineerada iyo cilmiga bey'ada ee waqtigaas ayaa go'aamiyay in fiilooyinkaasi ay shan jeer ka xoog badan yihiin sidii loo baahnaa.
Markii la dooranayo oranji, liinta waxaa loo xushay maadaama ay si fiican isugu dhafan tahay deegaanka dabiiciga ah, maadaama ay tahay midab diiran oo la jaan qaadaya midabada dhulka, kana soo horjeedda midabada qabow ee cirka iyo badda. Waxay sidoo kale siisaa aragti wanaagsan maraakiibta safraya.
Muuqaalkeedu wuxuu u baahan yahay dadaal badan: rinjiyeyntaada waa in dib loo hagaajiyaa maalin kasta. Waxyaabaha cusbada ku jira ee hawadu waxay qasaareysaa birta ka samaysan.
Waxay leedahay lix haad, saddex jiho kasta, iyo kuwa kale oo gaar ah oo loogu talagalay dadka lugeynaya iyo baaskiiladaha. Dadka lugeynaya iyo baaskiil wadayaashu waxay mari karaan waddooyinka maalintii inta lagu jiro. Maalmaha shaqada, dadka lugeynaya iyo kuwa wata baaskiilku waxay wadaagaan wadada dhinaceeda bari, laakiin maalmaha fasaxa ah, baskiilayda waxay isticmaalaan wadada galbeed.
Tan iyo dhismihiisii, waxay iska caabisay dhulgariirro kala duwan, sida dhul gariirkii caanka ahaa ee caanka ku ahaa San Francisco sanadkii 1989. Intaas waxaa sii dheer, wuxuu xirmay kaliya seddex jeer dabeylo xoogan awgood.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » America » Buundada San Francisco